टेलिकमको ठेक्कामा पूर्वसंचारमन्त्री बाँस्कोटाको हस्तक्षेप ! टेलिकमलाई ठाडै १२ करोड घाटा - Samajbad
टेलिकमको ठेक्कामा पूर्वसंचारमन्त्री बाँस्कोटाको हस्तक्षेप ! टेलिकमलाई ठाडै १२ करोड घाटा
in अर्थ / पर्यटन, विज्ञान/प्रविधि, विशेष
काठमाडौं : पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल ठाडो हस्तक्षेपले नेपाल टेलिकमको एक ठेक्कामा करिब १२ करोड अनियमितता भएको पाइएको छ । गोकुल बाँस्कोटाका विश्वासपात्र मानिने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) डिल्लीराम अधिकारीको ठाडो हस्तक्षेपपछि टेलिकमलाई ठाडै १२ करोड घाटा हुने गरी सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनी इन्सपुर सफ्टवेयर ग्रुपलाई ठेक्का नदिएर सबभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने चाइना मोबाइललाई ठेक्का दिएको टेलिकम भित्र गाँईगुई चलेको छ । २० करोड (१६ लाख ५० हजार डलर) मा गर्न सकिने गरी गरिएको प्रस्तावलाई छाडेर ३२ करोड (२६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीलाई टेलिकमले छनौटको आशयपत्र दिएपछि त्यसको सर्बत्र विरोध हुन थालेको छ । संचारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका बाँस्कोटाले अहिलेसमम पनि आफ्ना विश्वास पात्र अधिकारी मार्फत् नेपाल टेलिकममा हस्तक्षेप गरिरहेको टेलिकमका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
त्यो टेन्डर खुलेको डेढ महिनापछि अर्थात् सेप्टेम्बर २५ तारिखमै खोल्ने भनिए पनि १० दिन अघि अर्को सूचना जारी गर्दै त्यसको समय थप गरिएको थियो । टेलिकमले आह्वान गरेको सो टेन्डरमा ९ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये ८ वटा कम्पनीलाई मूल्यांकन समितिले योग्य ठहर्याएको थियो । त्यसरी योग्य सूचीमा पर्ने कम्पनीमध्ये ५ वटा चिनियाँ, एउटा भारतीय, एउटा श्रीलंकन, एउटा नेपाली र भारतीय कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गर्नेगरी प्रस्ताव गरेका कम्पनी थिए । बोलपत्रमा सहभागी भएको सूर्या इन्टरप्राइजेजलाई भने मूल्यांकन समतिले अयोग्य ठहर्याएको थियो ।
टेलिकमको मूल्यांकन समितिले योग्य ठानेका आठवटा कम्पनीमध्ये चिनियाँ कम्पनी इन्सपुरले उक्त ठेक्काको लागि १६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको लागत प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, चीनकै बेइजिङ युइएन टेक्नोलोजीले १८ लाख १० हजार, एशिया इन्फो इन्भोटेसन टेक्नोलोजी कन्सोर्टियमले २६ लाख ७० हजार तथा चाइना मोबाइलले २६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको लागत प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै, भारतीय कम्पनी स्टेरलाइट टेक्नोलोजीले २८ लाख ५० हजार, श्रीलंकाको लङ्का बेलले ५० लाख, ओबीसीएन र एभीआईभीए कन्सोर्टियमले ६५ लाख तथा चीनकै अर्को कम्पनी हवाले क्लाउड टेक्नोलोजीले १ करोड अमेरिकी डलरमा त्यस्तो बेलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सूर्या इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनीलाई भने आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै अयोग्य ठहर्याएकोले सो कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावलाई खोलेर हेरिएन ।
कम लागतको ठेक्का छाडेर धेरै लागत प्रसताव गर्ने कम्पनीलाई छनौट गर्ने आशय दिएकोमा चाइना मोबाइलभन्दा कम मूल्यमा ‘बिङ’ गर्ने तीनवटै कम्पनी असन्तुष्ट छन् । ती कम्पनीहरुले आशयपत्र दिइएको दिन आइतबार नै गुनासो दर्ता गराइसकेका छन् । आशयपत्र दिइएको ७ दिनभित्र त्यस्तो गुनासो दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर टेलिकमले हाल कसैलाई पनि त्यसको जवाफ पठाइएको छैन । यसले राज्यको स्वामित्व रहेको टेलिकमको प्रतिस्पार्धात्मक क्षमता घट्दै जान्छ । यदि उनीहरुले त्यस्तो केही गरेनन् भने पनि २० करोडमा हुने कामलाई ३२ करोड भन्दा बढी तिर्न बाध्य पारेर टेलिकमलाई १२ करोडको नोक्सान हुन्छ । टेलिकमलाई १२ करोड बढी ठेक्कामा दिन बालुवाटारले अख्तियारलाई प्रभावित पारेको बताईन्छ । त्यस्तै सो ठेक्कामा ७० करोड भ्रष्टाचार काण्डपछि राजीनामा दिएका पूर्वसंचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि हात रहेको स्रोतको दाबी छ । डिल्लीराम अधिकारी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) भएदेखि नै टेलिकम निरन्त घाटामा गईरहेको भन्दै टेलिकमकै कर्मचारीहरु नै अधिकारी बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नेपाल टेलिकमको फोर जी ठेक्कामा पनि चर्को अनियमितता भएको भन्दै पूर्वसंचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र एमडी डिल्लीराम अधिकारीको अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ ।
२०७७७ साउन १७ गते बिहान ९ बजे प्रकाशित ।
जनकपुर चुरोट कारखाना झै टेलिकमलाई डुबाउने अभियानमा सक्रिय एमडी अधिकारी